international | Rochak Khabar
आइफोन जस्तै देखिने पेस्तोल का कारण युरोप मा तनाब आइफोन जस्तै देखिने एक पेस्तोलका कारण युरोपका प्रहरी यतिवेला तनावमा छन् ।
एमाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार प्रहरी अधिकारीहरुलाई लागेको छ कि अमेरिकाबाट यस्तो पेस्तोल सार्वजनिक भएलगत्तै युरोपमा तस्करी हुने प्रयास हुनेछ ।
14 Jan, 04:03 AM
करिना कपुर आमा बनेपछि उनलाई भेट्न अस्पतालमा सेलिब्रिटीको ताँती लागेको थियो । खान र कपुर खानदानका साथै थुप्रै चर्चित अनुहार करिना र उनको छोरा तैमुरको अवस्था जान्नका लागि अस्पतालमा पुगेका थिए । उनलाई सैफ र अम्रिताका छोरा इब्राहिमले पनि अस्पतालमा भेट्न गएका...
24 Dec, 11:16 AM
चटपटे बेच्ने वाला यसरी बने हिरो आलोम भारतमा चियावाला र नेपालमा तरकारीवालीले सोसल मिडिया हुँदै संसारभर तहल्का मच्चाए । उनीहरूले पाएको चर्चाकै भरमा फिल्म खेल्ने अफर पनि आए । तर यतिबेला बंगलादेशका एक हिरो भने ‘सुपरस्टार’ भइसकेपछि सोसल मिडियामा छाएका छन् ।
23 Dec, 10:48 AM
ट्रम्पका भन्दा २० लाख बढी मत ल्याएर पनि पराजित भएकी रहिछन् हिलारी, यसरी खुल्यो रहस्य
वाशिंटन डिसी (अमेरिका), ९ मंसिर । अमेरिकाको आम निर्वाचन भएको दुई हप्ता पार गरिसकेको छ । निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यस संक्रमणकालिन अवस्थामा मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा व्यापक लागेका छन् ।
25 Nov, 03:02 AM
जव राष्ट्रपतिका ‘हट’ फोटो बाहिर आए …
क्रोयसियामा रहने मानिसहरु कोलिन्डा किटरोविकलाई सवैभन्दा हट र ग्लैमरस राष्ट्रपति मान्छन् । कोलिन्डाको बिकनी अवतार भएको तस्वीर यतिबेला सामाजिक संजालमा चर्चामा छ । उनी बिचमा मस्ती गरिरहेका तस्वीर बाहिर आएका छन् ।
21 Nov, 12:17 PM
महिलाको खाजामा पुरुषकोे लिंग भेटिएपछि…
एजेन्सी । ससेज संसारको रोजाईको खाजा हो । तर अफ्रिकी राष्ट्र घानाको राजधानी आक्राकी ओकाशु नामक महिलाको प्लेटमा पुरुषको लिङ्ग आकारका ससेज आइपुगेपछि हंगामा नै मच्चिएको छ ।
20 Nov, 10:55 AM
ट्रम्पको जस्तै कपाल भएको चराको चर्चा एकाएक चल्यो विश्वभर विश्वमा नै यतिबेला डोनाल्ड ट्रम्पको जति चर्चा सायदै अरु कसैको होला । कल्पना ने नगरिएका ब्यक्तिको एकाएक अमेरिका जस्तो सर्वशक्तिमान देशको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अहिले विश्वभर तर.ग ने पेदा भएको छ ।
17 Nov, 04:26 AM
केही समय यता नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषा बनाउन लागिएको भन्दै ब्यापक विरोध भैरहेको छ । हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउन संविधान संसोधन गर्न लागिएको भन्दै एक मिडियाले समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल रंगिए । तर सरकारले भने यस्तो...
14 Nov, 03:30 AM
महिलाका सेकेण्ड ह्याण्ड भित्री वस्त्र किन्न यस्तो होडबाजी !
दुनियामा अहिले अनलाइनबाटै नुन देखि सुनसम्म र सुई देखि गाडीसम्म बिक्रि हुन्छ । समय तथा पैसा समेतको बचतका लागि मानिसहरु समयक्रमसँगै अनलाइनबाटै खरीददारी गर्न चाहन्छन् ।
10 Nov, 03:06 AM
एउटा व्हेल माछाले बान्ता गर्दा तीनजना गरिब रातारात करोडपति भएका छन् । ओमानका तीन मछुवारले व्हेल माछाले गरेको बान्ता भेट्टाउँदा उनीहरुको भाग्य नै खुलेको हो । व्हेल माछाले बान्ता गरेर फालेको अवशेष भेट्टाएकै कारण अब उनीहरुले २५ लाख अमेरिकी हात पार्ने भएका ह...
8 Nov, 11:44 AM
पत्रकारले किमलाई पछाडिबाट किस गर्न खोजेपछि…तस्वीर भाइरल - फोटोफिचर सहित
रियलिटी स्टार किम कार्दशियन सधैं कुनै न कुनै कारणले चर्चाको शिखरमा रहने गर्दछिन् । यतिबेला भने उनी जुन कारणले चर्चामा छिन् त्यो सुनेर सबै आश्चर्यमा पर्नेछन् ।
2 Nov, 02:43 AM
भेडा चराउने केटी बनिन् फ्रान्सको शिक्षामन्त्री
हाल सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले सानोमा भेडा चराउँदाको तस्बिरहरु भाइरल भइरहेको छ ।यो सबैलाई प्रेरणा दिने नजाद भल्लाउद–बेल्कासेम, एक मोरोक्कोकी केटीको कथा हो जो आज फ्रान्सको शिक्षा मन्त्री बन्न सफल भएकी छिन् । उनको जन्म सन् १९७७ मा नाडोरमा भएको थियो ।
24 Oct, 11:51 AM
लामो खुट्टा भएकी मिस युवती यी हुन्, तपाई पनि चिन्नु होस् ?
लामो खुट्टा भएकी मिस युवती यी हुन् । तपाई पनि चिन्ने की ? एउटा अनौठो प्रतियोगिता रुसको मिस लन्गेस्ट लेग्स प्रतियोगितामा साइबेरियाकी एक ट्रेनी लयर ले जित हात पारेकी छन् । उनको खुट्टाको लम्बाई १०६ सेन्टीमिटर छ ।
23 Oct, 03:25 AM